KUTAMA Zimbabwe's founding leader Robert Mugabe was buried on Saturday in his home village of Kutama, ending a dispute between his family and the government of his successor President Emmerson Mnangagwa over his final resting place. | Video
BATTLEFIELDS, Zimbabwe Zimbabwean rescuers pulled the bodies of at least 22 illegal gold miners out of shafts west of Harare that were flooded earlier in the week, and rescued eight more alive, officials and witnesses said on Saturday.
ESIGODINI, Zimbabwe Zimbabwe's ruling party on Saturday gave the go-ahead to President Emmerson Mnangagwa to run for a second five-year term in 2023, all but ending speculation the 76-year-old would step down for one of his deputies at the next election.
ESIGODINI, Zimbabwe A report into Zimbabwe's post-election violence that left six people dead and dozens injured in August will be published next week, President Emmerson Mnangagwa said on Friday.
MAZOWE, Zimbabwe A farm owned by Robert Mugabe's wife Grace is at the centre of a legal dispute after hundreds of illegal gold miners invaded parts of the property and started mining gold.